Bernardo Silva: “Manchester United kama mid ahan kooxaha horyaalka u tartamya” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Bernardo Silva: “Manchester United kama mid ahan kooxaha horyaalka u tartamya”
Bernardo Silva: “Manchester United kama mid ahan kooxaha horyaalka u tartamya”
Posted by: Ahmed Haadi October 31, 2018
Muqdisho – Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Bernardo Silva ayaa diiday inuu magacaabo Manchester United, markii wax laga weydiiyay kooxaha City kula tartami horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
City ayaa u dhaqaaqday hogaanka horyaalka Premier League iyadoo 1-0 kaga badisay Tottenham Hotspur habeenkii isniinta, laakiin kooxda kaalinta labaad ee Liverpool ayey iska dhibco yihiin kooxda Pep Guardiola.
Chelsea ayaa kaalinta seddexaad ku jirta, iyadoo kaalinta afaraad ay fadhiso Arsenal iyo Tottenham oo ku jirta booska shanaad, 10 kulan oo la dheelay olalahaan 2018-19.
Silva ayaa sheegay in shanta koox ee ugu sareysa ay kula tartamayaan horyaalka xilli ciyaareedkan, sida muuqata Man United ayaa ku jirto kaalinta sideedaad.
“Waxaan qabaa in Chelsea iyo Liverpool ay aad u xoogan yihiin Arsenal iyo Tottenham sidoo kale, waxaan qabaa inay adag tahay, sababtoo ah xilli ciyaareedkii hore qofna uma rajeyneynin in aan badino kulamo badan, islamarkaana aan gaarno heerka ugu sarreeya dhibcaha,sidaa darteed xilli ciyaareedkan kooxaha waxay ogyihiin, in ay doonayaan in ay innaga na garaacaan “ayuu Silva u sheegay suxufiyiinta.
“Dabcan aad ayay u adag tahay, laakiin waxaan u ciyaareynaa kulan kasta si adag si aan u helno seddexda dhibcood, marka ugu dambeynna aan isku dayno in aan u dabaaldego Premier League.”
City ayaa garoonka Etihad Stadium ku soo dhaweyn doonta United kulan ka tirsan Premier League 11ka November.
Previous: Neymar “ Messi waa saaxirka kubadda cagta”
Next: In ka badan 90% Caruurta dunida waxay qaataan hawo sumeysan + sawiro